Qabsoo Bilisummaa Humni Waraanaa Dhaabuu Danda’u Hin Jiru! « QEERROO
Qabsoo Bilisummaa Humni Waraanaa Dhaabuu Danda’u Hin Jiru!
October 29, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Gochi TPLF jidduu kana qabsoo uummata Oromoo dhaamsuu Oromoiyaa guutuu keessatti dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jirtu gonkumaa iyyuu qabsoo bilisummaa fi muraannoo saba Oromoo akka sibilaa jabeessaa jira. Hojiin TPLF guyyaa guyyaa akka nama buddeena bukkeesee tolshuu haala qabsoo bilisummaa saba Oromoo mijjeessuu irratti bukkeessitee akka bisheesaa jirtu ifa waan jiru dha.
Dhiigni qarree fi qeerroo Oromoo kan dhngala’uu jalqabe har’a miti. Akka lolaa gannaa dhangala’ee qabsoo bilisummaa kana sooraa har’aan gahee jira. Wareegamni isaanii garaa jabinaa fi murannoo guutuu waan nuuf keneef fajii isaanii qabannee bilisummaa keenyaa aarsaa tahuu hiriroo akka gallu nu godhee jira. Gochi TPLF takkuu tokko illee akka of duuba nuu nu deebisuu hin dandeenye firrii fi diinni keenya akka hubatu feena.
Goodansa qabsso bilisummaaf godhamu kana keessatti guyyaa guyyaan muxxaannoo fi barumsa argachaa jirra. Akkuma qabsoon jabbaachaa fi hammacha deemeen humni qabsawwanii, fakkaatee bultootaa fi ayyaan ilaalatootaa wal calalaa deeme. Yaroo sochiin Qabsoon Qeerroo Bilisummaa Oromoo geggeeffamu jabaatee uummta bal’aa ammate gara fuula duraa tarkaanfatu ayyaan ilaalatoonni fi fakkaatee bultoonni afaan mi’eefatanii , sagalee uummataa dubbachuudhaan qabsoo uummataa kana harkaakan butatan itti fakkaate akka wixxifachaa turan hundi keenya agarree jirra.
Biyya alaa (diaspora) maqaa activistota of mogaasanii sochi uummata Oromoo biyya keessaa deemaa jiru kan hooggannuu fi himaamata kennu akka isaan taheetti facebook fi media isaanii irratti addeessaa turan. Warri kun maqaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo jedhu illee lagachuuf jecha’ Qeerroo Oroomiyaa’ jechuu irra darbanii qabsoo Saba Oromoo gufachiisuuf diinaaf iccit argatan dabarsanii kennuudhaan dhiiga ilmaan Oromoo batala dhangala’eef itti gaafatamni guddaan isaan eegata.
Biyya keessatti Qeerroo Bilisummaa Oromoo kan bakka bu’u Foolee ijaarrachuu fi warra Abbaa Gadaa illee aboomii isaanii jala oolfachuuf carraqiin guddan godhamaa fi godhame jira. Waan barbaadan haa godhan malee qabsoo Bisilsummaa Uummata Oromoo gara boodaa deebisuu miti bakka jirutti akka dhaabbatu gochuu hin danda’an. Caalaa akka qaroomnu, caalaa damaqnu, caalaa ijaaramnuu fi caalaa hidhannu nu gochaa jira. Warri nu ajjeessuu fi warri nu ajjeesisuu hunduu diina keenya. Haala kana keessatti attamti qabsaa’uu dandeenya ? gaaffin jedhuu deebii’aa argachuu qaba. Qaabsoon keenya diinni lammaffaa warra tahan wajjin yaroof walitti hirkannaa goonne of irratti eeggachaa diina keenya isaa duraa kan tahe Mootummaa TPLF irratti xiyyeefachuu qabna. Lamaan isaani yaroo tokkotti akkeekachuun wareegama qaalii akka baafnu nu godha.
Torbaan darban keessa haalli walii galtee Qeerroo Qaabsoo Bilisummaa fi poolisootaa Oromiyaa jidduu ture baayyee kan saba boonisuu fi gammachiisu dha. Qabsoo bilisummaaf sabni Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti gochaa jiruuf jabbinaa fi abdii olaana tahee argameera. Qeerroon Qabsoo bilisummaa fi Poolisoonni Oromoo Amboo irratti qabeenya uummata Oromoo samamaa jiru qabeechuun haqa isaannii ti. Yaroo waranni Agazii qarree fi qeerroo Oromoo irratti rasaasa roobsaa jiru poolisonni Oromoo baqatanii kampii galuun amma isaanitti boonne hojii isaanii kana itti qaanofna.
Haala kana irra waan hubatuu qabnu jira. Haalli kun dhalachuu kan danda’e poolisoonni Oromoo qaree fi qeerroo Oromoo waliin boba’anii qabeenya saba isaanii tuhachaa jiran dhiisanii akka lubbuu isaanii olfachuu hin baqanne dha. Warri OPDO keessaa qaama olii jiran afaaniin haa fakkeessan malee uummta keenya wajjin akka hin jirre ifatti agarre. Danbalii qabsoo bilisummaa uummata Oromoo jaabatanii TPLF irraa aangoo caalu agachuu malee qabsoo ummataatti dabalamanii akka hin ture ragaan kana caalu hin jiru. Utuu danda’anii uummatni kun qabsoo kana fudhatee akka isaanitti galu gochuu dha. Warri kun warra waggaa 27 oli TPLF wajjin qabeenya Oromiyaa samaa fi samsisaa, ilmaan Oromoo ajjeessaa fi ajjeesisaa as gahe maalumaaf tasa jijjiramu danda’u jennee akka eegnu namaaf hin galu.
Magaalli Amboo kan dhiiga ilmaan Oromoon dhiqamuu eegalte kaleessa utuu hin taane waggaa 27 dura gaafa TPLF Finfinnee galuuf deemtu. Guyyaa sanaa kaase yaroo dhaabbate hin qabu. Kanaaf dhiigni ilmaan Oromoo guyyaa guyyyaan dhangala’u qabsoo bilisummaa Saba keenyaa ni jabeessa malee hin diigu kan jennu. Guyyaa har’a ilmi Oromoo fi hintali Oromoo tokko Ammboo keessatti yoo wareegaman magalaa Oromoo hundatu gada. Uummata Oromoo hundatu booyya. Yaroon adda nu baasanii nu cabsanii fi nu bitaan hafee jira. Uummatni Oromoo waan qabuun waliif dirmachaa , waliin dhaabbachaa , wal gargaaraa fi waliin wareegama jira.
Gochi TPLF sab boonnummaa uummata Oromoo akka sibilaa wal itti baqisee jabeessaa kan adeemu yoo tahu, karaa biraa hojiin diinaa eegeree uummata Oromoof kan bu’aa godhaa qabu gochaa akka jiru hubachuun ni barbaaachisa. Akka saba itti walon saamamne, waloon ajjeefamne, waloon qabsoofne fi waloon yoo bilisoomne waliin biyya walaboome ijaarrane nagaan jiraachuuf ayyaana guddaa qabna. Qabsoon hadha’an har’a gochaa jirru kun mi’ooftuu fi lalistuu Oromyaa boru ijaaramtuuf hundeessaa dha.
Kanafuu qabsoo hadhooftu gamtaan gonu kana toofataa barbaachisuu adda baafne murannon itti fufnu malee TPLF nu ajjeessuu irra afuura hin baaftu. Bakka Agaaziin waraanaa fi meeshaa jajjaba qabu itti jalaa maquun wareegama tasa dhufu nu baraara. Barbaachisaan filmaata biraa hin qabne basaasotaa fi lukkee diina warra tahan irratti tarkaaffiin naannoo tokko tokko itti fudhatamuu eegale bakka hundatti itti fufuu qaba. Warri kun yoo uummata keessaa funaanamnii dhabaman Agaaziin qaroo Oromoo adamsee ajjeessuun ni dhaabbata. Kana malee uummatni Oromoo qabeenya qabuu hundaan meeshaa waraanaa bitachuu fi humna ittisa waraana yoo ijaarate malee sanyiin Oromoo dhugumee baduu ni mala. Qabsso bilsummaa bakkaan gahuuf humni hidhate murteessaa dha. Har’as meeshaa dhuma uummatni qabuun bakka bakka itti humna ittisa biyyaa hundeessu qabsoon keenya nuu irraa eegate. Manguddumaan OPDO kan harka nu laachisiisuu fi hihdannaa qabnu nu hiikachiisu male kan qabsoo keenyaaf dhabalta tahu akka hin qabne hubanne tooftaa jabaan irra qaxxamuruuf dandeettii qabaachuu qabna.
« Oromo peoples power comes from truth not hate
ደም እየጠጣ ያደገ እስከ ዕለተ-ሞቱ ድረስ ደም ካልጠጣ ሊኖር ኣይችልም የወያኔ ጦር ሃይል በኦሮሞ ዜጎችና በሌሎችም ብሄር ተወላጆች ላይ እየፈጸመ ያለውን ዘግናኝ ግድያ ኣጥብቀን እናወግዛለን »